Turkigu lama dagaalami karo Masar ee maxaa xala - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Turkigu lama dagaalami karo Masar ee maxaa xala
Inkastoo Erduqaan jeclaa lahaa inuu booska ka tuuro madaxweynaha Masar oo uu u arko inuu afgambiyay saaxiibkii Maxamed Mursi iyo ururkiisa akhwaan Muslimiin, Erduqaan ma helayo taageero aan Qadar ka ahayn, waana ku jabayaa dagaalka Liibiya ayuu qabaa Cali Calasow.
Turkiga ayaa ciidan ahaan iyo dhaqaale ku filanba dagaalami kara in muddo ah laakiin taageerada uu ka haysto aduunka intiisa kale ayaa gabaabsi ah markaad iska dhaafto wadamada jaarkiisa ah ee mid sida Siiriya uu diidey inuu ka baxo, joojiyana taageerada uu siiyo ururkiisa akhwaan Muslimiin.
Turkiga oo taageero siiyay maamulka caasimada Liibiya ku eg wuxuu rabaa inuu qabsado Liibiya oo dhan taas oo ka dhigin in urur diimeedka akhwaan ay xad la yeeshaan Masar.
Taas ma dhacayso waanu ku jabayaa waayo Turkigu xad lama laha Liibiya mana haysto taageerada dawladaha waaweyn sida Maraykanka iyo Ruushka inkastoo uu ka mid yahay xulafada Naato haddana Taram niyad uma hayo inuu taageero u fidiyo Erduqaan iyo duulaankiisa Liibiya ayuu yiri Cali Calasow.
Madaxweynaha Masar marnaba ogolaan maayo in akhwaan muslimiin uu jaar la noqdo, wuxuuna haystaa taageerada dadka Liibiya oo hore codbixin u diidey urur diimeedkaas.
Dhaqaalaha dagaalka Erduqaan
Qadar ma bixin karto dhaqaalaha ku baxaya dagaal muddo sii socda, waana ta keentay in Erduqaan ilaa hadda ka aamuso inuu jawaab siiyo Masar. Wuxuuse Liibiya ku soo daldalayaa hub.
Haddii ciidanka Masar soo galaan Liibiya ma jirto wax ka horjoogsan kara inay soo socdaan ilaa caasimada. Masar waxa ku daba jira marka laga yimaado Carabta sida Sucuudiga iyo Imaaraadka wadamada Ruushka iyo Faransiiska oo ilaa hadda cudud gelin Liibiya.
”Dagaalka Liibiya waa dagaal dhaqaale oo Erduqaan ku taageerayo urur diimeedkiisa jooga caasimada isna bedelkeeda la siiyay kheyraadka badda u dhaxaysa Liibiya iyo Turkiga iyo wadamada badda la wadaaga ee Giriiga, Masar.
Erduqaan oo Yuhuuda saaxiib la ah markay timaad dagaalka uu ka wado Suuriya ayaa dhinacan kale waxay ka soo horjeedaa kheyraadka Liibiya siisay waana halka Taram ka taageerayn Erduqaan. Wuxuu caan ku yahay Erduqaan in marna Taram ku cararo marna Buutin laakiin hadda midna ma haysto taageeradooda.
Isku soo duub xalku wuxuu ku jiraa in Erduqaan faraha ka qaado Liibiya iyo dhiiga Muslimiinta ee daadinayo ama la fariisto Khaliifa Xaftar si xal waara looga gaaro dawladnimada dalka Liibiya oo u baahan nin adag oo amarka soo celiya.